Aagga Cunnada: waa maxay, menus, faa iidooyin iyo khasaarooyin | Ragga Stylish
Cuntada Aaga ayaa ah mid ka mid ah qorshooyinka cuntada ee ugu caansan. Haddii aad u baahan tahay inaad ka takhalusto baruurta xad-dhaafka ah, waa ikhtiyaar inaad tixgeliso.
Waxaa loo tixgeliyaa cunto leh heer dhexdhexaad ah oo dadaal ah, waxaan ku sharxi doonnaa hoosta waa maxay aagga iyo waxa lagama maarmaanka u ah in lagu sii nagaado.
1 Muxuu ballan qaadayaa?
2 Cunnooyinka la oggol yahay iyo kuwa la mamnuucay
4 Faahfaahinta qandaraasyada
5 Xeerarka Cuntada Aagga
Waxaa abuuray Dr. Barry Sears 1995, Cunnada Aaga waa cunto kalooriyeedu hooseeyo. Waxay ballanqaadaysaa inay gubeyso baruurta (xitaa intaad huruddo) adigoon dareemin gaajo. Istaraatiijiyaddu waa in la dheellitiro qaadashada saddexda nafaqeeye ee kala ah: dufanka, karbohaydraytyada iyo borotiinka.
Aaggu ma dammaanad qaadayo miisaanka oo yaraada isla markiiba. Waxaad filan kartaa inaad lumiso qiyaastii rodol usbuuca ugu horeeya. Si kastaba ha noqotee, waxay ballanqaadaysaa in dhammaan miisaanka lumay ay noqon doonaan dufan, ma ahan murqo iyo maahan biyo.
Sida muuqata, qorshahan cuniddu wuxuu ku lug leeyahay xakamaynta hormoonka kaas oo jirka iyo maskaxdaba ka dhigaya mid hagaagsan marka usbuucyadu socdaan. Waxaa loo tixgeliyaa taas mid ka mid ah saameynteeda ayaa ah in dharka aad si fiican kuugu habboon tahay.
Cunnooyinka la oggol yahay iyo kuwa la mamnuucay
Cunto su'aasha laga qabo waxaa ku jira saddex cunto iyo laba cunto fudud maalintii. Mid kasta oo ka mid ah cuntooyinka waa isku-dar ah borotiinno, karbohaydraytyo iyo dufan. Borotiinada dufanka yar (digaag aan lahayn maqaarka, turkey, kalluunka…), glycemic index-ka hooseeya ee karbohaydraytyada (inta badan miraha iyo khudaarta) iyo qayb yar oo dufanka caafimaadka qaba (saliid saytuun ah, avokado, yicib…). Helitaanka aashitada dufanka leh ee omega 3 aad ayey muhiim ugu tahay cunnadan.
Marka laga hadlayo cunnooyinka la mamnuucay, ma jiraan kuwa gebi ahaanba jira. Si kastaba ha noqotee, haddii karbohaydraytyadu ay udub dhexaad u yihiin cuntadaada, way kugu adkaan kartaa inaad la qabsato qorshahan cunitaanka. Waana taas cuntooyinka sida rootiga, baastada, ama badarka kama ciyaaraan door aasaasi ah ama xitaa heer sare ah.
Sidoo kale iska ilaalinta cunnooyinka kala duwan waa la dhiirigelinayaa, oo ay ku jiraan miraha iyo khudaarta oo hodan ku ah sonkorta (galleyda, karootada, mooska ...), hilibka dufanka badan ee dufanka leh iyo jaallo.
Saamiyada ayaa aad muhiim ugu ah qorshaha cuntada ee uu abuuray Dr. Barry Sears. Way iska cadahay dhamaan cuntooyinka waa inay lahaadaan isku mid: 40% karbohaydraytyo, 30% borotiin iyo 30% dufan.
Si boqolleydan loo dhaqan geliyo, saxankaaga u qaybi saddex qaybood oo isla eg. Seddex meelood meel saxanka wuxuu u dhigmaa borotiinada iyo labada qaybood ee soo hartay miraha iyo khudaarta aan cagaarka ku taagnayn. Ugu dambayntii qanjaruufo dufan mononunsaturated ah ayaa lagu darayaa. Qaado qaado oo ah saliid saytuun ah oo bikro ah ama lows sida yicibta ayaa lagu talinayaa.
Marka laga hadlayo kalooriyada, hadafku waa in la gaaro 1.500 oo kaloori maalintii marka laga hadlayo ragga. Iyo ilaa 1.200 haddii ay tahay haweeney fulisa qorshahan cunnada.
Marka la eego joogitaanka badan ee khudaarta, waa cunto ay cunaan kuwa cuna khudradda iyo kuwa khudradda cuna. Aagga Cunnada ayaa sidoo kale bixisa suurtagalnimada cunista gluten-la'aanta, maadaama ay niyad jabineyso qaadashada qamadiga, shaciirka ama galley. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad iska ilaaliso gulutonka gebi ahaanba, waxaad weli u baahan tahay inaad eegto sumadaha alaabada.
Ku-takrifalka cusbada waxay kuu horseedi kartaa dhibaatooyin sida dhiig-karka. Qorshahan cuniddu wuxuu ku yar yahay cusbada maxaa yeelay waxay xooga saareysaa cunnooyinka cusub halkii laga heli lahaa soodhiyam-ka cuntada la warshadeeyay. Caadi ahaan, si aad uga faa'iideysato faa'iidadan, waa inaad ku dadaashaa inaad u isticmaasho sida ugu yar ee ugu macquulsan ee aad ugu karin karto uguna kari karto cuntooyinka aagga.
Kuwa soo socda ayaa ah faa'iidooyin kale:
Way ka xaddidan tahay cuntooyinka kale ee borotiinka.
Waxay xasilin kartaa heerarka sonkorta waxayna yareyn kartaa qulqulka.
Inta badan dadka raaca cuntadan waxay maareeyaan inay lumiyaan miisaanka.
Way adkaan kartaa in la helo qaddarka maalinlaha ah ee lagu taliyey ee kaalshiyamka ah.
Waxay u horseedi kartaa yaraanta fiber, fitamiin C, folate, iyo macdano kala duwan.
Waxay culeys saari kartaa kelyaha.
Waxay ku badnaan kartaa dufanka dadka u baahan inay xakameeyaan cadaadiska dhiiggooda iyo heerarka kalastaroolka.
Dareenka gaajada awgeed, iyo yaraynta cunnooyinka caadiga ah sida bariiska ama baastada, way adkaan kartaa in la raaco muddada dheer.
Xeerarka Cuntada Aagga
Dhammaan qorshooyinka cuntada waxay ku saleysan yihiin sharciyo iyo talooyin taxane ah, iyo Aagga Cunnadu waa mid aan ka reebanayn. Kuwa soo socda ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Waxaa lagugula talinayaa inaad si tartiib tartiib ah u soo bandhigto dhammaan isbeddelada lagama maarmaanka ah muddada dhowr toddobaad ah illaa aad si sax ah ula kulanto dhammaan tilmaamahaaga.
Xisaabtu waa furaha cuntadan. Qaaciddada 40-30-30 waa in lagu dabaqaa dhammaan cuntooyinka (had iyo jeer saddex waaweyn iyo laba cunto fudud). Sidoo kale, waa lagama maarmaan in la sameeyo dadaal lagu sameeyo isu-dheellitirnaanta shanta cunto ee maalinlaha ah.
Quraac waa in la cunaa inta lagu jiro saacadda ugu horreysa subaxa hore. Saacaddu waxay bilaabmaysaa tirinta laga bilaabo isla markaad sariirta ka degto. Sidoo kale, waa inaanay ka badnaan shan saacadood inta u dhexeysa cunto kasta. Ugu dambeyntiina, Aagga Cunnadu wuxuu nagula talinayaa inaan helno cunto fudud intaadan seexan (labadii saacadood ee la soo dhaafay gudahood).
Isku darista cunto caafimaad leh jimicsi joogto ah ayaa lagama maarmaan u ah si aad u ahaato caafimaad iyo xoog. Aagga Cunnadu waxay kugula talineysaa jimicsi dhexdhexaad ah laakiin joogto ah. Socodka degdega ah nus saac saacad walba waa tusaale wanaagsan. Baaskiil wadista ama dabaasha ayaa sidoo kale loo arkaa xulashooyin wanaagsan, illaa iyo intaad iska ilaalineyso xad-dhaaf ah. Isku dar jimicsiga jimicsiga leh 5-10 daqiiqo oo ah tababar xoog leh maalin kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntada Aaga